के–के हुँदैछ एनआरएन चुनावमा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
के–के हुँदैछ एनआरएन चुनावमा ?
असोज २८ । काठमाडौँ, गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार हुने मतदानमा विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा गरिने भएको छ । संघले पहिलोपटक नेपालमै बनेको बिद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गरी चुनाव गर्ने भएको हो । यसले मतदान र मत गणना प्रकृया सरल र छिटो हुने छ ।
नयाँ नेतृत्व चयनसँगै शुक्रबार बिहान गैरआवासीय नेपाली संघको सातौ बिश्व सम्मेलन सुरु हुने छ । ‘एनआरएनएः राष्ट्र पुनःनिर्माणको सच्चा साझेदार’ भन्ने नारासहित सुरु हुने यो सम्मेलन भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणकै सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहने छ । राष्ट्रपति डा। रामबरण यादवले उदघाटन गर्ने सम्मेलनको समापन घोषणापत्र जारी गर्दै शनिवारसमापन हुने छ ।
यसअघि बुधबार गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं अन्तराष्ट्रिय अधिवेशन काठमाण्डौंको सोल्टी होटलमा बुधबार सुरु भएको छ । विश्वका ७१ मुलुकबाट आएका करिव १ हजार दुई सय प्रतिनिधिको उपस्थीतिमा अधिवेशन सुरु भएको हो ।
अधिवेशनको उद्घाटन सत्रपछि बन्द सत्र सुरु भएको थियो । बन्द सत्रमा महासचिव कुमार पन्तले पेश गर्नुभएको सांगठनिक प्रतिबेदन र कोषाध्यक्ष डा। बद्री केसीले पेश गर्नुभएको आर्थिक प्रतिबेदन पारित भएको छ ।
यसैगरी बिधान समितिका संयोजक डा। हेमराज शर्माले पेश गर्नुभएको प्रस्ताव आबश्यक छलफल र संसोधनपश्चात पारित भएको छ ।
जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा अब एक महिलासहित तीन जना उपाध्यक्ष रहनेछन् भने एक सचिव र सहकोषाध्यक्ष पद थप गरिने भएको छ । यसैगरी ६ वटै क्षेत्रमा महिला क्षेत्रीय उपसंयोजक र युवा क्षेत्रीय उपसंयोजक पदसमेत थप गरिएको छ ।